News by The Times of India Newspaper - Latest News 5.3.5.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.3.5.1 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
The official Times of India app brings you the latest English news, breaking news headlines of Lok Sabha Parliamentary Elections, live news alerts from Bollywood News & Photos, World Cup Cricket, Business, Travel, Gadgets, Education & City news updates on the go from India & around the World. Download the TOI news app on your mobile to watch live TV, news in photos & videos from across the globe - anywhere, anytime!
အိန္ဒိယ app ရဲ့တရားဝင် Times သတင်းစာကိုသင်ခ်ဆာဘားလွှတ်တော်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲများ၏နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂလိပ် သတင်း ကိုချိုးဖောက်သတင်း ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, ဘောလီးဝုဒ်သတင်း & ဓါတ်ပုံများကနေတိုက်ရိုက်သတင်းသတိပေးချက်များ, ကမ္ဘာ့ဖလားခရစ်ကက်, စီးပွားရေးဆောင်တတ်၏ , ခရီးသွား, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပညာရေး & စီးတီး သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ အိန္ဒိယကနေ & ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းသွားလာရင်း။ တိုက်ရိုက်တီဗီ စောင့်ကြည့်ဖို့သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင် TOI သတင်း app ကို Download, ကမ္ဘာအနှံ့ကနေဓါတ်ပုံ & ဗီဒီယိုများအတွက်သတင်း - အချိန်မရွေး, နေရာမရွေး,
2019 ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များကို & ကမ္ဘာ့ဖလားခရစ်ကက်ပျေါလှငျအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများကိုရယူပါ။
APK ဗားရွင္း 5.3.5.1